किन लाग्दैछ विवेकको बट्टामा बिर्को ? – समावेशी
बुधबार, भाद्र २७, २०७५ | ४:५६:४६ |
कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा पहँुच जमाउँदै आएका त्यस्ता हस्तीहरुको दर्जनौं परिवार छ, जसले आपूmले बालीनाली लगाएको खेतीबारीमा जंगेपिलर सरेको वर्षौं भइसक्यो । आफ्नो पदचापले खेलेका भूमि अब चाहेर पनि चन्द्र, सूर्यको अधिनमा छैन् । लालपूर्जामा भएकाहरुको बाली पारी तिरै थन्किने भएपछि हलोको फाली नपरेको दशकौं भइसक्यो । राजमार्गमा झाँकी लिएर हिँड्ने नेताहरुले मुलुकको प्रमुख समस्या आपूmभित्र रहेको कहिल्यै खोलेनन । राष्ट्रवाद र स्वाधीनताको थालनी आफ्नै बलेसीबाट शुरु गर्नुपर्ने होइन र ? बरु अरुलाई पुड्को देखाउन आपूmले नक्कली राष्ट्रवादको सहारा लिएर हिँडे । केपी ओलीलाई लाग्छ– मेची महाकाली बाटोमा हिँड्ने लर्को सबै आफ्ना कार्यकर्ता हुन । अहँ होइन, त्यहाँ अधिकांश लोभीपापीको झुण्ड छ । राजनीतिका नाममा तपाईंहरुले देशमा जनताको बीउ नै मास्नु भएको छ ।
पुलिस र सेनामा क्रान्तिकारी संघ खुल्नुबाहेक त्यहाँ भित्रका रमिता झन्झन् छताछुल्ल भएका छन् । त्यहाँका हाकिमहरुको मुख्यालय आफ्नो कार्यालय नभएर नेताको हेडक्वार्टर सरेको वर्षौं भइसक्यो । फौजीमा सरुवा बढुवा हुन ब्रिफकेस हटकेक बनेका सन्दर्भ भलीभाँती बाहिर आएकै हुन । देशका हरेक निर्णय दारी र सारीका प्रभावमा पर्ने क्रम तीब्र छ । जर्नेलहरुले लेखेको आत्मबृत्तान्त आत्मरति बन्दा सिनियर गड र जुनियर डगको अवस्था राम्रैसंग उदाङ्गिएको छ । सामाजिक मनोविज्ञान हेर्दा लाग्छ– समयले बुढ्यौलीपनलाई विस्थापित गराइदिएको छ । रामनाम जप्नेहरु हराउँदै छन् । बरु रिटायर्डहरु ‘नेभर टायर्ड’ भन्दै राज्यकै सुविधामा रमाउन कस्सिदैछन् । रिटायर्ड हुनुअघि नै पदको मेलोमेसो मिलाएर निस्कनेहरुको भीड पनि उत्तिक्कै हेर्नलायक देखिन्छ । आपूmबाहेक संसारलाई उल्लू देख्नेहरुको रोचक भीडन्त घरघर र टोलटोलका भट्टीमा देख्न पाइन्छ ।
गौतम बुद्ध मूर्ति पूजाका विरोधी थिए । तर कालान्तरमा विश्वभर लाखौं उनैका मूर्ति बनाइए । प्रत्येक मानिस बुद्ध हो । मात्र फरक भगवान गौतम बुद्ध उठेका बुद्ध हुन भने हामी सुतेका बुद्ध । हरेक मानिस जागृत हुने हो भने बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ । पुस्तकालयमा राखिएका गीता, कुरान र बाईबल आपैंंm युद्ध गर्दैनन्, जो युद्ध गर्छन तिनीहरुले त्यसको रस लिएकै हुँदैनन् । गाई जुनसुकै रंगको किन नहोस दूध त सेतै हुन्छ नि ।
नेपालका कुनै कम्युनिष्ट नेतालाई अर्को देशको कम्युनिष्ट नेताले पत्याएर एउटा साइकल उपहार दिएको सुनिएको छैन तर तिनैले विरोध गर्ने राजा त्रिभुवनले हिटलरबाट पाएको गाडीको अवशेÈ अझै संग्रहालयमा सुरÔित छ । आखिर भगवान विश्वासिला भए त कम्युनिष्टले राजालाई पनि त पुज्दो रहेछ नि ।